Home » Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu » Inye ego na uru ka Covid-19 Pandemic na-emetụta Ọfụma maka FRAPORT
FRAPORT mmefu eji belata ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ - Otu na - enweta nsonaazụ arụmọrụ (EBITDA) - Nsonaazụ otu (uru net) na - adịghị mma - Fraport CEO Schulte: "Anyị na - atụgharị na ala nke ọdọ mmiri ahụ"
N'ime ọnwa atọ mbụ nke 2021, arụmọrụ ego nke Fraport Group gara n'ihu na-emetụta oke oke ọrịa Covid-19.
Na njem ndị njem ka na-agbadata na Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na n'ofe ọdụ ụgbọ elu nke Group niile, ọnụọgụ ego na-ebelata ihe karịrị pasent 40 kwa afọ na oge akụkọ Jenụwarị-Machị.
Fraport depụtara nsonaazụ ọjọọ nke otu (uru net) nke mwepu nde 77.5.
Onye isi oche ndị isi oche Fraport AG, Dr. Stefan Schulte kwuru, sị: “industrylọ ọrụ ụgbọelu ka na-ahụbeghị mgbake ọ bụla pụtara ìhè na nkeji nke mbụ nke 2021. Nke a abụghị ihe a na-atụghị anya ya gbasara ọnọdụ ọrịa zuru ụwa ọnụ. Ka o sina dị, anyị nwere obi ike na anyị na-atụgharị site na ala ebe ahụ. Mgbasa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Germany na ọtụtụ mba ndị ọzọ na-enweta ume. Ọzọkwa, ọtụtụ nhọrọ nnwale Covid-19 dị ugbu a. Ndị mmadụ ka nwere ọchịchọ siri ike njem na inyocha ụwa. Yabụ, anyị na-atụ anya na ndị njem ga-arị elu n'ụzọ pụtara ìhè n'oge ọnwa ọkọchị - ọkachasị n'okporo ụzọ ndị Europe na mbụ, kamakwa maka mpaghara mba ndị ọzọ ga-aga ogologo oge. N'otu oge ahụ, anyị emeela ka nsogbu ahụ belata iji belata ọnụ ahịa na ịhazigharị ụlọ ọrụ anyị ka ọ dịkwuo mma ma nwekwuo ike maka ọdịnihu. "
Trafficgbọ njem ndị njem na-agbadata ngwa ngwa
N'ime ọnwa atọ mbụ nke 2021, isi ụlọ Frankfurt n'ọdụ ụgbọ elu ụgbọelu hụrụ ka ndị njem na-adaba site na 77.6 pasent kwa afọ ruo naanị ndị njem 2.5 nde. E jiri ya tụnyere nkeji iri na ise nke afọ tupu ọrịa na-efe efe nke 2019, nke a na-egosi mbelata ka sie ike nke pacenti 83.2. N'aka nke ọzọ, ebu FRA na nkeji nke mbụ rịrị elu site na 21.6 pasent kwa afọ na 565,497 metric tọn (elu 7.3 pasent ma e jiri ya tụnyere Q1 / 2019). N’ọdụ ụgbọ elu Fraport si na mba ụwa niile, okporo ụzọ gbadara na nkeji nke mbụ, na mbelata kwa afọ sitere na ihe dị ka pacenti iri ise rue pacenti 50 na ọdụ ụgbọ elu ụfọdụ. N'ịbụ ndị ndị ahịa ụlọ siri ike na-akwado, naanị ọnụ ụzọ abụọ rụrụ nke ọma: St Petersburg's Pulkovo Airport na Russia (gbadata pasent 90) na Xi'an Airport dị na China (pasent 18.3).
EBITDA guzoziri eguzozi - Nsonaazụ otu ga-anọgide na mpaghara adịghị mma
Na-egosipụta mmepe mmepe okporo ụzọ, ọnụego ndị otu belatara site na 41.8 pacenti na nkeji nke mbụ nke 2021 ruo € 385.0. Gbanwe maka ego sitere na iwu metụtara metụtara mmefu ego n'isi na ndị enyemaka Fraport n'ụwa niile (dabere na IFRIC 12), Ngalaba ego gbadara 41.9 pasent na € 344.7 nde. Nkwekọrịta e mere na oge mkpesa n'etiti Fraport na ndị uwe ojii Federal Federal nke German na nkwụghachi ụgwọ nke ọrụ nchekwa ụgbọelu - nke Fraport nyere n'oge gara aga - mepụtara ego ọzọ nke € 57.8 nde, nke metụtara EBITDA otu ego ahụ.
N'ime ụlọ ọrụ ya niile dị na Frankfurt, Fraport belatara mmefu ọrụ site na ihe dị ka 28 pasent - nke a rụzuru site na njikwa njikwa ọnụ, mmejuputa ọrụ oge dị mkpirikpi (n'okpuru Germany) Ọrụ nwa oge mmemme), na mbelata ndị ọrụ na-aga n’ihu site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Na ụlọ ọrụ Group Fraido ejikọtara ọnụ zuru ụwa ọnụ, mmefu ọrụ nwere ike belata ihe dị ka pasent 35. N'ihi usoro nchekwa ego ndị a na nsonaazụ otu nke sitere na nkwekọrịta ya na ndị uwe ojii Federal Federal German, Fraport nwetara Group EBITDA dị mma ma ọ bụ nsonaazụ arụmọrụ nke € 40.2 nde (gbadata pasent 68.9 kwa afọ) na nkeji nke mbụ (Q1) nke 2021. Ewezuga ihe ọ ga-eme site na nkwekọrịta ahụ na ndị uwe ojii Federal Federal nke German, Fraport ka na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu EBITDA ziri ezi, n'ihi usoro nchekwa ego a na-etinye n'ọrụ. Otu EBIT dara site na € 12.3 nde na Q1 / 2020 ma wepu nde 70.2 na Q1 / 2021. Otu EBIT gbadara nde Yuro 116.0 na oge akụkọ (site na mbelata € 47.6 na Q1 / 2020). Nsonaazụ otu ma ọ bụ uru dị nro belatara site na mbelata € 35.7 na Q1 / 2020 wee wepu nde 77.5 na nkeji nke mbụ nke 2021.
Ọ fọrọ nke nta ka e mechaa ihe omume afọ ofufo
Fraport ebidola usoro dị iche iche na ọkwa niile iji gbochie mmetụta ọrịa ọrịa coronavirus, gụnyere mmemme mbelata ego dị ukwuu. Site na iwepu mmefu ndị na-adịghị mkpa maka arụmọrụ, Fraport na-echekwa ọnụ ahịa ihe dị ka € 100 nde na € 150 nde kwa afọ. N'otu oge, Fraport wedara ma ọ bụ kagbuo ọtụtụ ntinye ego, ọkachasị na ntọala ụlọ Frankfurt - si otú a belata mmefu ego metụtara ya site na ihe dị ka billion 1 ijeri karịa ọkara na ogologo oge.
Fraport amalitela ịhazi nzukọ azụmahịa ya na nchịkwa ya iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo ala ma nwekwuo ike. Companylọ ọrụ ahụ ga-enwe ike belata ọnụ ahịa ndị ọrụ na Frankfurt site na ihe ruru € 250 nde kwa afọ ma e jiri ya tụnyere 2019, site na igbutu ihe gbasara ọrụ 4,000 n'ụzọ mmekọrịta ọha na eze. Enweelarịrị ihe mgbaru ọsọ a. N'ihe dị ka Eprel 1, 2021, Fraport belatara ndị ọrụ ya na Frankfurt (ma e jiri ya tụnyere Disemba 31, 2019) site na ụfọdụ ndị ọrụ 3,900 - ndị hapụrụ ụlọ ọrụ na-erite uru nke ngwugwu na usoro ndị ọzọ; ma ọ bụ site na mkpara ndị ọrụ oge niile.
Fraport ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ obere oge na-arụ ọrụ na ebumnuche nke ibelata obere oge ọnụahịa ndị ọrụ. Na nkeji iri na ise nke 2021, ihe dịka 80 pasent nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ nne na nna Fraport AG na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na Frankfurt gara n'ihu na-arụ ọrụ na obere oge. Nke a gụnyere mbelata oge ọrụ nke ihe dị ka pasent 50 tụrụ na usoro nke awa dị.
Inwere ego nke Fraport na-abawanye
Fraport welitere ihe ruru ijeri 1.9 ijeri na ntinye ego ọzọ na nkeji nke mbụ nke 2021. Usoro ntinye ego gụnyere itinye nkekọ nke ụlọ ọrụ, nke ewepụtara na ụzọ abụọ na ngụkọta nke billion 1.15. Site na usoro ndị a, ego mmiri mmiri Fraport na akara kredit nwere ihe ruru ijeri 4.4 (dika nke Machị 31, 2021). Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma iji dozie nsogbu na-aga n'ihu ma tinye ego dị mkpa maka ọdịnihu.
Mgbe emechara nkeji iri na ise, ndị isi ụlọ ọrụ Fraport na-eleba anya na afọ azụmaahịa 2021 dum. Eburu amụma na njem ndị njem na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt ga-adị site na nde 20 ruo nde 25. A na-atụ anya ka ego ndị otu na-erute ihe ruru ijeri € 2 na 2021. Thelọ ọrụ ahụ na-ebu amụma Group EBITDA na ihe dịka € 300 ruo € 450 nde. A na-atụ anya na Group EBIT ga-adị ntakịrị, ebe nsonaazụ Group (net uru) ga-adịgide na mpaghara na-adịghị mma. Agbanyeghị, ihe ngosi akara ngosi abụọ a ga-akawanye mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere 2020.